MIT, Dreams and Ways – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in shared information and tagged Benifits, Development, education, Expectation, Internet, myanmar youths, Opencourseware, strength. Bookmark the permalink.
← Individualism vs. Co-operative
Utility ပြီးတော့ Utilized →
4 thoughts on “MIT, Dreams and Ways”
ကလိုစေးထူး | February 8, 2009 at 3:34 pm
ဒုက္ခပါပဲ။ ကျနော် စောစောက တင်တဲ့ ကွန်မန့်က အခု ပို့စ်မှာ ရေးချင်တာ။ အပေါ်အောက်တွေ လွဲကုန်ပြီ။
ကုမ်ရာသီသူ | February 9, 2009 at 12:54 am
အကိုစေးထူးရေ ရွှေ့ပေးလို့တော့ မရဘူးဗျ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ပဲ နားလည်ယူလိုက်ပါပြီ၊ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
N3 | February 24, 2009 at 2:42 am
ကုမ်ရာသီသူ | February 24, 2009 at 3:50 am
ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကတော့ မနည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုက်တွန်းခိုင်းစေနေရတုန်း၊ အဟဲ 🙂